Ihe mere ndị na-eme nchọpụta n'Africa kwesịrị iji sonyere Psychology Science Accelerator - AfricaArXiv
Ihe kpatara na ndi nyocha Africa kwesiri isonye na Accelerator Psychological Science Accelerator
bipụtara Adeyemi Adetula & Patrick S. Forscher on 13th March 2020 13th March 2020
Ebumnuche nke AfricanArXiv gụnyere ime ka obodo dịrị n’etiti ndị na-eme nchọpụta Afrịka, mee ka mmekọrịta dị n’etiti ndị na-eme nchọpụta n’Africa na ndị na-abụghị ndị Africa, buliekwa profaịlụ nke nyocha ndị Africa n’usoro mba ụwa. Ebumnuche ndị a kwekọrọ na ebumnuche nke nzukọ dị iche, Accelerator Psychological Science (PSA). Ntọpu a na-akọwa etu ebumnuche ndị a si arụkọ ọrụ ma na-arụ ụka na isonye na ndị na-ahụ maka sayensị Sayensị ga-erite uru na ndị otu AfricanArXiv site na imekọ ihe ọnụ na ịnweta akụ.
Gini bu onye na - eme ngwanta omuma nke sayensi?
PSA bụ ọrụ afọ ofufo, nke kesara ụwa niile, na usoro ọchịchị onye kwuo uche ya nke ihe dị ka ụlọọgwụ 500 sitere na mba iri asaa na kọntinenti isii mmadụ niile bi na Africa, gụnyere Africa. Ọmụmụ ihe gbasara mmụọ na-ejikarị ndị na-eme nchọpụta ọdịda anyanwụ na-amụ ndị sonyere Western (Rad, Martingano, & Ginges, 2018). Otu n'ime ebumnuche mbụ nke PSA bụ iji nyere aka dozie nsogbu a site n'ịgbasa ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na ndị na-esonye na nyocha akparamàgwà mmadụ, si otú ahụ na-eme ka ọgụgụ isi bụrụ ihe nnọchite mmadụ.
Ebumnuche a dabara na ebumnuche nke AfricanArXiv: na -ekwu maka enweghị ndị na-eme nchọpụta akparamaagwa ndị Western na-ebuli profaịlụ nke ndị na-eme nchọpụta akparamàgwà mmadụ na ime ka mmekọrịta dị n'etiti ndị na-eme nchọpụta banyere Africa na ndị na-abụghị ndị Africa. Na mgbakwunye, PSA nwere mmasị ịgbasawanye netwọkụ ya na Africa: ọ bụ ezie na PSA chọrọ ime ka nnọchite anya na kọntinent niile, na njedebe ikpeazụ naanị 1% n'ime ụlọ nyocha 500 ya si Africa.
Otu PSA nwere ike isi baara obodo nyocha nke Africa
Ebumnuche nke PSA na AfricaArXiv bụ otu a iji merie / nwetakọta otu ndị nyocha Africa iji sonyere PSA na mmemme ya na nyocha nke ụwa na sayensị. Anyị kpebisiri ike ịgbasa profaịlụ nke ndị otu mpaghara obodo nyocha Africa.
Onye nyocha ihe gbasara mmụọ nwere ike sonyere PSA na akwụghị ụgwọ. Ndị nne na nna nke ndị otu ga-enwe ohere iji nye aka na ọchịchị PSA, nyefee ihe ọmụmụ a ga-arụ site na netwọk PSA nke ụlọ nyocha, ma jikọta ọnụ ma nweta akwụkwọ ikike na oru metụtara ọtụtụ narị ndị nyocha si n'akụkụ ụwa niile. Ọrụ oru PSA buru ibu nke ukwuu; omumu ihe izizi zuru uwa banyere na network ya (Jones et al., 2020) gụnyere ihe karịrị ụlọ nyocha 100 sitere na mba 41, ndị na-agbakọtara ihe karịrị 11,000 ndị sonyere.
PSA na emeputa otutu nkwukọrịta nyocha, nke nwere ike ịbụ kesara ihe n’enweghi ego site na AfricaArXiv. Ihe nyocha PSA nke na-etinye ndị sonyere na Africa dị n'efu maka nyocha nke abụọ. Enwere ike iji nyocha Afrika ndị a nyochaa nyocha ndị a, na nyocha nke na-esite na ya nwere ike ịkekọrịta ya ọzọ site na AfricaArXiv.
Uru akpọrọ aha otu PSA
Nzọụkwụ mbụ iji nweta uru nke PSA bụ ghọọ onye otu site na ikwuputa nkwa ekwenye iji nyere aka na PSA n'otu uzo ma obu ozo. Ndi otu n’efu.
Ozugbo ị bụ onye otu, ị ga-enweta uru ise ndị a:
Ntinye onyinye n’efu iji mee ka otu nnukwu mba dị iche iche wee rụọ ọrụ. Ndị PSA na-anabata atụmatụ maka ọmụmụ ihe ọhụrụ iji mee ka netwọk ya dị kwa afọ n'etiti June na August (ị nwere ike ịhụ oku 2019 anyị Ebe a). Gị onwe gị nwekwara ike itinye aro. Ọ bụrụ na anabataghị atụmatụ gị n'oge usoro nyocha ndị ọgbọ, PSA ga - enyere gị aka iwere ndị ọrụ mmekọrịta sitere na netwọkụ mba ofesi 500, wee nye nkwado n'akụkụ niile nke imecha nnukwu ọmụmụ saịtị. Nwere ike mgbe ahụ n'okpuru ngwa ahịa nyocha ọ bụla sitere na usoro a na - akwụghị ụgwọ dị ka punch na AfricaArXiv.
Soro oru ngo PSA. PSA na - arụ ọrụ isii nke ọtụtụ ebe nyocha ugbu a. otu nke na-agbakọ ndị na-emekọ ihe ọnụ. N'ime izu abụọ na-esote, PSA ga-anabata usoro ọmụmụ ọhụụ. Dịka onye na - ejikọ ọrụ ọnụ na otu ọmụmụ anyị, ịnwere ike ịnakọta data ma ọ bụ nyere aka na nyocha ndekọ, njikwa ọrụ, ma ọ bụ njikwa data. Ọ bụrụ n’ị sonyere oru dị ka onye na - emekọ ihe ọnụ, ị ga - enweta akwụkwọ edemede na - esite na mpempe akwụkwọ a (nke nwere ike ịdị nweere onwe gị site na AfricaArXiv). I nwere ike igu akwukwo banyere ihe omumu nke PSA na aru oru ugbu a Ebe a.
Soro ndị isi akwụkwọ akụkọ PSA. Ndị PSA na-ezipụ oku maka nnabata ọmụmụ ọhụrụ kwa afọ. Dịka ụlọ ọrụ na-enye ego na akwụkwọ ọgụgụ, ọ chọrọ ndị mmadụ ịrụ ọrụ dị ka ndị nyocha maka ntinye akwụkwọ ndị a. Can nwere ike igosi mmasị na ije ozi dị ka onye na-enyocha ya mgbe ị ghọrọ onye otu PSA. Na nzaghachi, a ga-edenye gị ka ị bụrụ onye so na onye isi oche akwụkwọ akụkọ PSA. You nwere ike itinye otu onye isi akwụkwọ akụkọ a na weebụsaịtị gị na CV.
Soro otu n’ime kọmitii na-ahụ maka nchịkwa nke PSA. Ebumnuche na usoro PSA si amalite na ya dịgasị iche kọmitii. Ohere dị iche iche na-ebilite mgbe niile iji sonyere kọmitii ndị a. Ije ozi na kọmiti na enyere aka ịduzi ntụzịaka nke PSA ma mee ka ndị na-eme nchọpụta mata ndị ha na ha ga-emekọrịta ihe n'akụkụ ụwa niile. Ọ bụrụ n’inwere mmasị isonye na kọmitii, sonyere ndị a Akwụkwọ akụkọ PSA na PSA Slack arụ ọrụ. Anyị na-eme ọkwa maka ohere ọhụụ iji sonyere kọmitii anyị na mpaghara ndị a.
Anata ụgwọ iji gbochie ọnụ ahịa mmekota. Anyị ghọtara na mmekorita mba ụwa nwere ike bụrụ ihe ịma aka ma dịkwa oke ọnụ, ọkachasị ndị ọrụ nyocha na ụlọ ọrụ ndị obere ego. PSA bu ndi n’enye ego mmezi iji kwado mmekota. Ugbu a, anyị nwere obere ọdọ mmiri nke otu ụlọ nyocha nyere aka, obere onyinye nke $ 400 USD iji nyere aka mebie ụgwọ nke isonye na oru nyocha PSA. Inwere ike itinye akwụkwọ maka inye ụlọ otu ihe onyinye Ebe a.
PSA bu n’ibulite mmekorita ya na oru anyi di otutu, nke ndi obodo na ndi nwere otutu. Anyị kwenyere na njikọta ndị a nwere ike ịba ndị uru nyocha n'Afrịka nnukwu uru. Ọ bụrụ na ikwere, ị nwere ike sonye na ibe anyi iji nweta ohere na obodo dị egwu na mba zuru ụwa ọnụ nke ihe karịrị 750 na-eme nchọpụta sitere na labs 548 na mba 70. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ.
Banyere ndị edemede
Site na Naịjirịa, Adeyemi Adetula bụ nwa akwụkwọ PhD na -Lọ nyocha CO-RE na Université Grenoble Alpes na onye otu Accelerator Psychological Science. Ade na-enyocha ma nchoputa nke uche na-ebute oke ala, ọkachasị mba Africa. Ọchụchọ nyocha ya gụnyere mmegharị, akparamagwa mmekọrịta na nnwale, akparamaagwa nke ọdịbendị, usoro nke ọgụgụ isi na akparamaagwa nke ọmụmụ na nke mgbazi. Can nwere ike iru ya na adeyemiadetula1@gmail.com
Patrick S. Forscher bụ ọkà mmụta sayensị nyocha ya na -Lọ nyocha CO-RE na Université Grenoble Alpes na-amụ etu esi akwado nnukwu mmekọrịta ọnụ na akparamaagwa. Ọ bụkwa onye ntinye aka na ntanetị maka Data na Accelerator Psychological Science Accelerator. Patrick na-ahụ maka ọtụtụ ihe omume na PSA, gụnyere mmepe na ntinye nke iwu PSA na atụmatụ ego. Mmasị nyocha ya gụnyere nyocha nyocha, nnwale nke ubi, nyocha nke meta, nyocha ndị ọgbọ, na otuto nyocha. Can nwere ike iru ya na schnarrd@gmail.com
Categories:	Njikọ AkaOpen AccessNyocha ndị ọgbọNkwukọrịta SayensịSubmission
Tags: pịaAccelerator Psychological Science